အပြစ်ကိုယ်စီရှိကြပါသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » အပြစ်ကိုယ်စီရှိကြပါသည်။
Posted by ကထူးဆန်း on Mar 14, 2012 in 2010/2012/2015 Election, Critic | 23 comments
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဧပြီ တစ်ရက်နေ့ ကျင်းပတော့မှာပါ ။
အကယ်၍ သင့် မြို့နယ်သည်ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ပါဝင်ဆင်နွဲရမည့် မြို့နယ် ဖြစ်ပါက
(၁) သင့်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ သင်သိပါသလား ။မည်ကဲ့သို့ သင်သိပါသလဲ။
(၂) သင်သိပါက ရှိပါက သင်မြို့နယ်မှ မည်သည့် ပါတီတို့ မှ မည်သူတို့ ၀င်ရောက် အရွေးခံ ကြမည်ကိုသင်သိပါသလား ။
(၃) သင့်ထံသို့ မည်သည့် ပါတီ မည်သူ မည်ဝါက ၀င်ရောက် အရွေးခံမည်ကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသိပေး အကြောင်းကြားမှု့ ရှိပါသလား။
(၄) သင့်ထံသို့ (သို့) သင် နေသော ရပ်ကွက် မြိုနယ် သို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ လာရောက်စည်းရုံးဟောပြောမှု့များရှိပါသလား ။
(၅) သင် မြို့နယ် မှ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည့်သူများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် နောက်ကြောင်း တို့ သင်သိပါသလား။
(၆) သင် ကိုယ်တိုင်ကော မည်သူမည်ဝါ မည်သည့် ပါတီတို့ ၀င်ရောက် အရွေးခံမည်ကို စုံစမ်းမေးမြန်းသိရန် အားထုတ်ပါသလား ။
၁။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ပါဝင်မှု့ ရှိမရှိ မည်သူမျှ အကြောင်းမကြားပါ ။ သွားရင်းလာရင်း ခလုတ်တိုက်ရင်းသိလာသည်ဟု ဖြေရပါမည်။ ဘယ်မှာ ဖတ်မိလိုက်လဲ ကျွန်တော်မသိပါ။
၂။ မည်သည့် ပါတီမှ မည်သူတို့ဝင်ရောက် အရွေးခံမည်ကို ယနေ့ မှ ကျွန်တော်သိပါသည် ။ Eleven Media web page တွင် ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်၌ မဲပေးပိုင်ခွင့် စာရင်းတွင် မှတ်ပုံတင်တစ်ခုတည်းနှင့် လူဦးရေ တစ်ထောင်ကျော် ပါဝင်နေဟု သိရ ဟု သတင်းပါလာ၍ ၄င်းသတင်းတွင် ဖော်ပြထားမှု့ အရ သိလိုက်ရပါသည် ။
၃။ မည်သည့်ပါတီမှ မည်သူ ၀င်ရောက် အရွေးခံမည်ကို အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ။
၄။ ကျွန်တော် မသိပါ ။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်သွားကြောင်းတော့ ပြီးမှသိလိုက်ပါသည်။
၅။ မသိပါ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်တို့ ကျွန်တော်မသိပါ။
၆။ မည်သူတို့ ပါဝင် ၀င်ရောက် အရွေးချယ်ခံမည်ကို မစုံစမ်းမိပါ ။ အားထုတ်မှု့ မပြုလုပ်မိပါ ။
သို့သော် ၀န်ခံစရာရှိသည်မှာ ကျွန်တော်သည် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှ မဲပေးခွင့် မရှိသော သူဖြစ်သောကြောင့် မည်သူတို့ ပါဝင် ရွေးချယ်ခံမည်ကိုသိရှိနိုင်ရန် စုံစမ်းအားထုတ်မှု့ ပြုခြင်း မရှိ ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်သည် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်နေသော်လည်း သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ကမာရွတ်မြို့နယ် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည် ။
သို့သော် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးအနေနှင့် ပါတီများမှ လာရောက်စည်းရုံးခြင်းသော်၎င်း ၊ ၄င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် မည်သူဖြစ်သည်။ မည်မျှ အရည်အချင်းရှိသည် ။ မဲပေးခံသင့်သူဖြစ်ကြောင်း အသိပေးရန် တစ်စုံတစ်ရာ ကြိုးစားအားထုတ်မှု့ မခံရ သေး ပါ။
အကယ်၍ ကျွန်တော်သည် မရမ်းကုန်းတွင် မဲပေးရမည့် သူဖြစ်နေပါက မဲပေးသော နေ့တွင်မှ ကြံ့ဖွတ် မဟုတ်ပြီးရော ဆို၍၄င်း ၊နံကြားလက်ညိုးထောက်၍သော်၎င်း (သို့) NLD ဖြစ်ပြီးေ၇ာ ဆို၍၄င်းပေးရမည့် ပုံ ပေါက်နေပါသည်။
ကျွန်တော်လို လူမျိုး ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ သိချင်ပါသည်။
မဲတစ်ပြားသည် အမှန်တစ်ကယ် အေ၇းကြီးပါက ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည့် ပါတီများကိုလည်း သိစေချင်ပါသည်။
လွှတ်တော်ထဲ အမှန်တစ်ကယ် ရောက်သင့် ရောက်ထိုက်သူ မရောက်ခဲ့ပါက ထိုသော အခါမှ လက်ညိုးထိုး အပြစ်မဖို့ကြဘဲ နောက်ဆုံးတွင် သူကြီး ၏ မှတ်ချက်ဖြစ်သည့်
“people get the government they deserve,”
လူတိုင်းကိုယ်စီ အပြစ်ရှိကြကြောင်း ။ ၀န်ခံကြရပါမည်။
ကျုပ်လဲ တစ်ယောက်ရှိနေပါသေးသည်။ ကျုပ်သည် ပန်းပဲတန်း မြို့နယ်တွင် နေထိုင်၍ မဲပေးခွင့်
ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူသည်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ နောက်ကြောင်း
ရာဇဝင် မည်သို့ရှိပါကြောင်း လာရောက် အသိပေး ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း ယနေ့ထိ မရှိပါ
သဖြင့် မည်သူ့ကို အဘယ်အကြောင်းကြောင့် မဲပေးရမည်ကို မသိရှိရသေးပါ။
ကိုထူးဆန်းကဲ့သို့ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် ကျုပ်တစ်ယောက်လည်း ရှိနေပါကြောင်း
တို့သည် မဲမရခင်မဲဆွယ်သောစကားကိုလူကြားကောင်းအောင်ပြောကြသည်။ လွှတ်တော်ထဲရောက်သော်—
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း လွှင့်နေပြီလား။
ဘာသတင်းမှ တက်မလာသေးလို့။ သိချင်ပြီ။ အမှန်လား။ ဆင်ဆာလား။ ?
Post နဲ့ မဆိုင် ဘဲ ဝင်ရှုပ်ခဲ့ လို့ စောဒီးပါ။ :opps:
Post အတွက်ကတော့ လက်မအမြင့်ကြီး ထောင်သွားပါတယ်။ :-)
အရီးလတ်ရေ .. မနေ့က .. အန်တီစု မိန့်ခွန်းပြောတာ ကြည့်ချင်လွန်းလို့ …. အစောကြီး အိမ်ပြန်စောင့်နေဖြစ်တယ် …. ။ တခြားပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သူမတူတဲ့ … အရည်ချင်းကတော့ တိကျ ၊ ပြတ်သား ၊ ရှင်းလင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်မှုနဲ့ …. အလွတ်ပြောဆိုနိုင်မှုတို့ပါပဲ … .. ။ အရမ်းသဘောကျတယ် …. ။ သူများတွေ .. မိန့် ခွန်းပြောတာ .မျက်လုံးက အောက်ကစာရွက် ငုံကြည့်လိုက် … ၊ ပြောနေတဲ့စာကြောင်းပျောက်မှာ စိုးလို့ .. လက်ထောက်ထားလိုက်နဲ့ .. အတော်ဆိုးတယ် … ။ ကိုယ်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိပြောသွားတဲ့ စတိုင်နဲ့ … ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ မျက်လုံးတွေကိုလည်း မြင်လိုက်ရပါတယ် … ။ သဘောကျတာကတော့ .. သူဝတ်ထားတဲ့ .. အကျီ င်္အပြာရင့်ရင့်လေးပါပဲ … ။ ဘယ်ပခုံးကနေ .. ရင်ဘတ်ပေါ်ထိ ဖျာကျနေတဲ့ … ဟမ်းမိတ် .. ခွတ်ဒေါင်းကြီးရယ် … ကွန်း ထရက်စ်အနေနဲ့ သုံးထားတဲ့ .. ရွှေရောင်ကျောက်လေးတွေရယ် ၊ ရွှေရောင်ကြယ်သီးရယ်ကို ကြိုက်တယ် … ။
(ကိုထူးဆန်းရေ .. စောရီးပါဗျို့ .. ဟီး ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ပဲ ရေးမိတွားဘီ )
No problem ပါ အိတုန်ရေ။ ကျွန်တော်လည်း မြ၀တီ မှာ လွတ်သွားတာနဲ့ မြန်မာ့ အသံ သတင်းရှေ့မှာ ပေ ဆောင့်နေလိုက်ရတယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပခုံးဘာချထားပါလိမ့်လို့ ကြည့်တာ ခွတ်ဒေါင်းမှန်း မသိဘူး ။ ပုဝါလိုလည်း နှစ်ဘက်ချတာမဟုတ်ဘူး ။ဘာ လည်းလို့ ။ အခုမှ သိတော့တယ် ။ :grin:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စည်းရုံးရေးမိန့်ခွန်းအခုပဲ လွှင့်ပြီးပါပြီ။
စကားအဆက်အစပ်အရ ဆင်ဆာ သိသိသာသာမတွေ့ရပါ။
မနက်ဖန်သတင်းစာမှာ ပါတော့မှ ထပ်ကြည့်ရပါဦးမယ်။
ဘာဆို ဘာမှမသိရတဲ့အထဲ ကျုပ်လဲအပါအ၀င်ပေါ့ဗျာ
သိချင်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်စုံစမ်းပေတော့ ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုး
ဒီနိုင်ငံမှာ တော်တော် အရိုးစွဲ အကျင့်ပါနေထင်ပါ့….
အရင် ပထစအစိုးရလက်ထက် ၁၉၄၈-၁၉၆၀ တုန်းကတော့
အခြားဆန့်ကျင်ဘက်ပါတီက အပုပ်ချမှ သိရ ဆိုပဲ……
ကျနော်အပါအ၀င်အများစုက တော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို သေချာမလုပ်ဘဲ
သူများလုပ်ထားတာကို သာ ဟိုဟာဖြစ်တယ် ဒီဟာဖြစ်တယ်နဲ့ ဝေဖန်လေကန်နေကြတာအမှန်
ျကျနော်တို့ရပ်နေတုန်းသူတို့က သွားနှင့်ပြီဆိုတာကို မမေ့ကြပါနှင့်လို့ စကားလက်ဆောင်ပါးလိုပါ၏
အရီးလတ်ရေ. ဆင်ဆာ က မပြောခင်ကတည်းက ဘယ်ဟာပြောခွင့်မပြုဘူးဆိုတာ ကြိုဖြတ်တာလို့ ဖတ်ခဲ့ ရပါတယ် ။ ပြောပြီးမှတော့ ဖြတ်ပုံမရပါဘူး ။ မှတ်မှတ်သားသားရှိလိုက်တာတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကိုပြန်ပြင်ရမယ် ။ လူထု ရွေးကောက်လိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ လွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့ စစ်တပ် ၂၅% ဟာဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်တဲ့ ဥပဒေ အနေနဲ့ ဥပမာပေးထောက်ပြ ပြောဆိုသွား ပါတယ်။
you tube ကတင်ထားတာ နားမထောင်လိုက်တဲ့ အတွက် တူ မတူ ကျွန်တော် confirm မလုပ်နိုင်ပါဘူး ။
ဦးကြောင်ကြီးပြောသလို ကျွန်တော်တို့ ဘက်တော့ မီးမပျက် ရုပ်မြင်သံကြားမပျက်ပါဘူး .. :grin:
ရေဘဲပြတ်နေတာ ။ ဂျိုးဖြူ ပိုက်ပေါက်လို့ ပြင်နေတာ နှစ်ရက်ရှိပြီ ရေမလာတာ။ နောက်နှစ်ရက်လောက် လည်းကြာဦးမယ် ပြောတယ်။
ဒီလှိုင်းဂျာနယ်မှာတော့ NLD အမတ်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ပါတယ်။
ဒါလည်း ဒီလှိုင်းဝယ်ဖတ်မှ သိရတာဆိုတော့
နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အနေနဲ့ အမတ်လောင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွေ လက်ကမ်းကြော်ငြာဝေပေးရမလိုပဲ။
အရင်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲတုံးက ကားတွေမှာ ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ လှည့်တာတွေ့မိတယ်။
အော် ဘတ်ဂျက်ကလည်း လိုသေးတယ်နော။
ကထူးဆန်းပြောသလို ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့ အစိုးရပဲရမှာပါပဲ။
အပ် ချ လောင်း ၊ ဥုံဖွ ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေ ရောက်လာစေ သတည်း ။
ရောက်ရှိလာအောင် စွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်သော ၎င်း ပါတီ သို့ မဲ ပေးမည်။
ယ္ခု ကောင်တွေကို လုံးဝ လုံးဝ မကြိုက် ။ လုံးဝ အလို မရှိ ။
ခများ တို့တော့ ဘယ်လို လဲ ဆိုတာ မသိပါ ။
အကျွနု်ပ်သည်ကား ဒါဆို ဒါပဲ ။
သတင်းများ အတွက် ကျေးဇူးဘဲ အားလုံးကို။ :-)
အချိန်မှီပါသေးတယ်။ စုံစမ်းပြီး ကြိုက်ရင်ပေးပါ။
မကြိုက်ရင်လဲ …. ဒီတစ်ခါတော့ ပေးလိုက်ပါ။
မပေးရင်တော့မပေးတဲ့မဲက တဘက်သတ်ထဲပါသွားမှာပဲ၊ အဲဒီတော့ သွားပြီးပေးဖြစ်အောင်ပေးလိုက်ကြပါ။ဒါမှ ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုပေးနိုင်သလို ကိုမကြိုက်တဲ့ပါတီကိုလည်းကိုယ့်မဲ မရောက်သွားမှာ။
မျက်စိဖွင့်၍ မဲပေးမည်.. မျက်စိပိတ်၍ မဲပေးမည်မဟုတ်ပါ ..
အမေစု ကိုသာ အားပေးမည် ဖြစ်ပါသည် အရပ်ကတို့…
ကိုယ့်ဂျင်း ကိုယ့်ဂျင်း ကျ သတ်နေဖြတ်နေ ဗိုလ်လုနေကြတယ်…
အပြင်က ကောင်တွေနဲ့ဆို ဘယ်တော့မှ နိုင်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး…
ရွာထဲမယ် ..ကော့မှူးသူ ရှိရင် ပြောပါ…
မိသား ဘသား ပီပီတောင်းရမ်းလက်ထပ်ပါ့မယ်…
အီလဲဗင်းမှာ မန့်သူတယောက် ရေးထားတာလေး တော့
”ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကို မဲပေးလိုက်သလဲ ကျွန်တော်သိတာပေါ့။ သူတို့လည်း သိမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မဲ ဘယ်သူရသွားလဲဆိုတာ တော့ သူတို့ပဲသိတယ်”
ကြောင်ကြီးကို မဲပေးပါ (အမဲသားဖြစ်သည်.. ဗိုက်ဆာလို့)
မှားမယ်နာ် ခွပ်ဒေါင်းကြယ် …ကြယ်နဲ့ ခွပ်ဒေါင်း..
အမေစု ကို မဲပေးမယ်ယ်ဆိုရင် ခွပ်ဒေါင်းကြယ် ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ …
အမေစု စကားလေးပါ ….
မနေ့က … ပြောသွားတဲ့ အထဲမှာပါတယ်… အနီရောင်အောက်ခံပေါ်မှာ .. ရွှေရောင်ခွပ်ဒေါင်းရုပ်ပါရှိပြီး … လက်ဝဲဘက်မှာ ငါးထောင့်ကြယ်ဖြူကြီး ပါတဲ့ အကြောင်းလေ… ။ တစ်ခါမြင်ဖူးတာနဲ့ ….. မှားစရာတော့ မရှိပါဘူး …. ။ ဒါပေမယ့် .. တချို့ကျေးလက်ကလူတွေ … အနီရောင်အောက်ခံကိုပဲ မှတ်တော့… မှား နိုင်ပါတယ် …
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ကျွန်တော် အသက် ၁၀ နှစ်ဆိုတော့ ဘာမှမသိတတ်သေးပါဘူး
နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မဲပေးတာကို ၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၁၀ နှစ်ခါကြုံဖူးပါပြီ..
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအတွက် မဲပေးရတော့ ကန့်ကွက်မဲကများနေရင် ဥပဒေသစ်ရေးမယ်လို့ နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀ မစောင့်ချင်လို့ ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ပါတယ်..
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ်မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့နယ်မှာ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့ အမတ်မပါလို့ ပယ်မဲဖြစ်အောင် ပေးခဲ့တယ်
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့.. ဟဲဟဲ
(၁) သိပါသကော..၊ သမ္မတကြီးက ကျုပ်တို့မြို့နယ်က ပြိုင်သွားတာကိုး
(၂) ဒီချုပ်က ဒေါ်စန္ဒာမင်း ပြိုင်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဗျာ။ ကျန်တဲ့ ဘယ်ပါတီက ဘယ်သူပြိုင်မယ်ဆိုတာ စိတ်ကိုမ၀င်စားဘူး..
(၃) ပါတီတွေကတော့ ဘယ်သူမှ လာမပြောဘူး၊ ဘော်ဒါတွေကတော့ သူတို့ရတဲ့ ဒီချုပ်က လက်ကမ်းကြော်ငြာ လာပြတယ်..
(၄) ကျုပ်ဆီတော့ တသီးတသန့် မဲပေးပါနော်လို့ ဒူမှလာမဆွယ်ဘူး .. တီစုတော့ မြို့နယ်ကို တရားလာဟောသွားဘီ.. (၀န်ထမ်းတွေကို မေ့မထားလို့ ကျေးဇူးပါ တီစု)
(၅) ဒေါ်စန္ဒာမင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတော့ သိထားတယ်၊
(၆) အားထုတ်ရအုံမှာလား ။ နေအုံးဗျာ ပြေးမေးလိုက်အုံးမယ်…
တိုက်ဆိုင်တာလား .. ဒါဖတ်မိသွားလို့လားတော့ မသိဘူး ။။ ဒီနေ့ အိမ်ပြန်လာတော့ အိမ်မှာ ဒီချုပ်ရဲ့ လက်ကမ်းစာစောင် လာဝေသွားတာ ရရှိလိုက်ပါတယ် ။
အခုတော့ NLD က ဒေါက်တာ မေ၀င်းမြင့် ၀င်ပြိုင်မယ် ။ ဒေါက်တာ မော်လမြိုင်မှာ မွေးပြီး သမ၀ါယမ ဆေးခန်း၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံ သမိုင်းမသန်မစွမ်းအထူးကုဆေးရုံ မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ဒီမိုကရေစီ အတွက် ထောင်ထဲမှာ ၁၁ နှစ်ခန့် ပေးဆပ်ခဲံ့တာက အစ သူများတွေ ကိုလည်း ပြန်လည်ဖြန့်ဝေ နိုင်ပြီမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NLD. ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့် ခင်ဗျား ။။။။